Civil Society Organizations Calls for Immediate Protection of Civilians in Armed Conflict in Myanmar | Burma Campaign UK
We, the undersigned civil society organizations call for the protection of civilians in armed conflict in Myanmar and for the State to comply with its obligations under the Geneva Conventions and UN Security Council Resolutions 1265, 1296 and 1325. The current targeting of innocent civilians in the conflict between the Arakan Army (AA) and the Myanmar military amounts to war crimes and must immediately cease.
Salai Lian, Chin Human Rights Organization info@chinhumanrights.org
Marc Batac, Initiatives for International Dialogue, marc@iidnet.org
128. ရွှေခြံမြေကွန်ရက်၊ ကွမ်းခြံကုန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊Burma/Myanmar
129. လူအခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးကွန်ရက်၊ ချောက်မြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ Burma/Myanmar
131. တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ရေလုပ်သားများ အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကွန်ရက်၊မြစ်ကျိုးတိုက်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊Burma/Myanmar
132. ဥသျှစ်ပင် လူငယ်ကွန်ရက်၊ ဥသျှစ်ပင်မြို့နယ်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ Burma/Myanmar
133. တောင်သူလယ်သမားများဥပဒေအထောက်အကူပြု ကွန်ရက် (PLAN-A) ၊မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ Burma/Myanmar
135. လူမူဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊Burma/Myanmar
136. Ramkhye – ရမ်းခေး မြစ်ကြီးနား ကွန်ရက်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ကချင်ပြည်နယ်၊Burma/Myanmar
138. ရပ်ရွာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (Area Peace and Development Forward) ကလေး မြို့နယ်၊ ကလေး ခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊Burma/Myanma